Igwefoto 100 MP, ihuenyo 90 Hz na ndị ọzọ bụ ihe anyị ga-ahụ na Xiaomi Mi MIX 4 | Gam akporosis
Igwefoto 100 MP, ihuenyo 90 Hz na ndị ọzọ bụ ihe anyị ga-ahụ na Xiaomi Mi MIX 4
Ikpeazụ data nke Xiaomi Mi Mix 4 na anyị kwuru banyere ihe ụbọchị ngosi nke ga-enwe. Tupu nke a, anyị na-ekwu ihe banyere ya foto foto ngalaba, nke anyị kọwara na ekwentị a ga-etinye ihe mmetụta ọhụụ Samsung bụ 108 megapixel ISOCELL Brigth HMX.
Ugbu a dị ka ozi kachasị ọhụrụ, na Mi MIX 4 ga-ebu azụ otu narị nde pikselụ igwefoto, nke bụ otu ihe na-ekwu na ọ ga-abụ 100 megapixels, n'ezie. N'aka nke ya, a ga-ejikwa ekwentị rụọ ọrụ nke nwere ihu igwe nwere ọnụego ume ọhụrụ nke 90 Hz, yana nkwado maka ịgba ụgwọ ngwa ngwa nke 40 watts. Ọ ga-enwekwa igwefoto dị n'ihu.
La Ngosipụta ọnụego 90Hz na ụlọ nkwalite bụ ntọala ewu ewu taa, ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya. Banyere ngwa ngwa ngwa ngwa 40-watt, Xiaomi kwupụtara ọkwa na ọ ga-ekwupụta ngwa ngwa ikuku na-ebugharị ngwa ngwa karịa eriri taa.
Nkọwapụta nkọwapu nke Xiaomi Mi MIX 4 site na isi na Weibo
Ndị mmadụ na-ekwu otú ahụ ogwe ahụ na-enye mkpebi QuadHD + (2K) ma nwee akụkụ ọnụ, dị nnọọ ka ngosi ngosi nke Vivo Nex 3 ga-enwe ya ma obu ihe yiri ya. Ahụ nke ọnụ na-eji atụmatụ seramiiki zuru ezu, ebe elu ahụ enweghị oghere.
Ọ bara uru na-egosi na ọ na-egosikwa na a kwadebere ya na ikpo okwu mkpanaka Qualcomm Snapdragon 855 gbakwunyere, nke a ga-agbakwunye na obi ọkụ nke ngwaọrụ ahụ na RAM nke ruru 12 GB na 1 TB nke ROM. Na mgbakwunye, ọ dakọtara na ntanetị 5G, nke bụ ihe anyị na-atụ anya ya. Ka anyị rịba ama na e nyere ụdị 5G dị iche iche nke Mi Mix 3. N'aka nke ọzọ, a ga-etinye igwefoto selfie na usoro mmapụta, dị ka egosiri na post dị n'elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Igwefoto 100 MP, ihuenyo 90 Hz na ndị ọzọ bụ ihe anyị ga-ahụ na Xiaomi Mi MIX 4
Google Pixel 4 ga-enweworị ụbọchị ngosi
IDC: Mbugharị Smartphone zuru ụwa ọnụ ga-ajụ afọ a, mana teknụzụ 5G ga-abawanye na 2020